बाँदर कसरी नियन्त्रण गर्ने ? संघीय सरकारलाई धुर्कोट गाउँपालिकाको पत्र | Nepal Ghatana
बाँदर कसरी नियन्त्रण गर्ने ? संघीय सरकारलाई धुर्कोट गाउँपालिकाको पत्र
प्रकाशित : १ भाद्र २०७८, मंगलवार १६:५५
तम्घास । गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका–५ वस्तुकी पार्वता भण्डारीको घर नजिकै एक हलको बारी छ । खेतीमा रोग नलागे र जङ्गली जनावरले नोक्सान नगरे छ मुरी मकै उत्पादन हुन्छ । ५/६ वर्षपहिलेसम्म साढे पाँचदेखि छ मुरीसम्म मकै भित्र्याएकी उनले यस वर्ष भने एक मुरी जति मकै स्याहारिन् ।
कारण हो, बाँदरले मकै नोक्सानी गर्नु । “राम्रै फले त छ मुरीसम्म हुन्थे तर अहिले एक मुरी पनि पुग्न मुस्किल छ,” उनले भनिन्, “मुख्य बाली नै नोक्सानी भए पनि निराशा हुँदोरहेछ ।” उनको घरमा उनीसँगै छोरा, बुहारी र छोरी छन् ।
बिहानदेखि बेलुकीसम्म चारैजना बारीमा बसेर बाँदर हेर्दासमेत मकै जोगाउन नसकिएको उनले गुनासो गरिन् । गत वैशाख ११ गते छरेको मकै भदौको अन्तिमतिर स्याहार्ने समय हो । बाँदर आतङ्कले गर्दा एक महिनाअगाडि गत साउनको अन्तिमतिर नै स्याहार्न बाध्य भएको उनले गुनासो गरिन् ।
वस्तुकै जितेन्द्र भण्डारीको पाँच रोपनी बारीमा आठदेखि १० मुरीसम्म मकै उत्पादन हुन्छ । मकै छरेपछि एकोहोर्याउने समयदेखि स्याहार्ने बेलासम्म लगातार बाँदर आइरह्यो । मकैमा दाना लागेदेखि बाँदरले बढी सताउन थाल्यो । अहिलेसम्म १८ देखि २० डोका अर्थात् चार मुरीभन्दा बढी मकै बाँदरले नोक्सान गरेको उनले गुनासो गरे ।
“एक पटकमा ९० देखि सयसम्म बाँदरको हूल आउँछ”, उनले भने, “बिहानदेखि बेलुकासम्म हामीहरुको ड्युटी बाँदर धपाउने हो ।” उनले बाँदरले मकै नोक्सानी गरेपछि बाँकी रहेका मकै समयअगावै स्याहारेको र बाँदरबाट गाउँले नै हैरान भएको उनले बताए । “बाँदर धपाउने बन्दुक दिगो समाधान होइन रहेछ,” उनले भने, “बाँदरका अगाडि आत्मसमर्पण गरेजस्तै भयो ।”
उनले बाँदरकै कारण वस्तुमा अधिकांश जग्गा बाझिएको गुनासो गरे । बाँदरले वस्तुका झन्डै दुई तिहाइ कृषक हैरानी खेपेका छन् । त्यसका साथै जैसिथोक, रेसुङ्गा नगरपालिकाको चेक्मी, गुरुङगाउँ, मालिका गाउँपालिकाका विभिन्न वडाहरुलगायत जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रमा बाँदरले सताउने गर्दछ ।
बाँदर नियन्त्रणका लागि गत वर्ष धुर्कोट गाउँपालिकाले २३ बाँदर धपाउने यन्त्र ल्याएको थियो । ठूलो आवाज निस्कने भएकाले केही बेर बाँदर भागे पनि फर्केर आउने समस्याले उक्त यन्त्र पनि प्रभावकारी नदेखिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष शिवबहादुर खत्रीले बताए ।
उनले गाउँकार्यपालिकाले संघीय सरकारलाई बाँदर नियन्त्रण गर्ने उपाय खोजी गर्न निर्णय नै गरेर पठाए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे । जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख प्रभात सापकोटाले जिल्लामा बाँदर नियन्त्रणका लागि कार्यक्रम नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
यसका लागि अहिलेसम्म अपनाएका सबै उपाय दिगो नभएकाले कार्यालयले पनि ठोस कार्यक्रम नराखेको उनको भनाइ छ ।
अनुदान खान छिमेकीको भैँसी देखाइयाे